Sidee hoos loogu dhigaa macOS High Sierra ilaa macOS Sierra | Waxaan ka socdaa mac
Sidee hoos loogu dhigaa macOS High Sierra ilaa macOS Sierra
Jordi Gimenez | | Mac OS X, Tababarada
Tani waa ikhtiyaar ay heli karaan adeegsadayaasha haysta barnaamijka 'macOS Sierra version' oo hadda lagu rakibay ama si toos ah ugu rakibaya qalabka USB horay loo abuuray. Laga bilaabo maanta, markaan qoreyno maqaalkan, nooca cusub ee macOS High Sierra ayaa hada la soo saaray waxaana macquul ah in dad badan oo isticmaala aysan haysan Mac-ga la cusbooneysiiyay, kiiskan waxaa muhiim ah in la abuuro diskkaan rakibmi kara USB ama disk dibada ah.
Haddii aad horey u haysatid macOS High Sierra oo la rakibay, xulashada aan maanta ku tusineyno waa inaad hesho qaabkii hore ee nidaamka hawlgalka, macOS Sierra. Si loo fuliyo hoos-u-dhigga waxaa jira xulashooyin badan laakiin waxa ugu badan ee lagu taliyo oo lagu kalsoonaan karo ayaa ah ka sameyso USB-gaan bootable-ka ah Mac oo leh rakibay macOS Sierramaadaama ay noqon doonto nooc la isku halayn karo oo dhab ah. Macno malahan haddii ay ka timid iMac, Mac mini ama MacBook, dhammaantood si isku mid ah ayey u shaqeeyaan.
Internetka waxaan sidoo kale ka heli karnaa nooca Apple ee nidaamka qalliinka ama xitaa waxaan hoos uga dhigi karnaa nuqul hore oo ah Mashiinka Waqtiga, laakiin waxaa ugu wanaagsan in si toos ah looga helo Mac oo la abuuro rakibo. Runtii waa wax ay adeegsadayaal badani leeyihiin haddii aan ku qabanno eber rakibid nooc kasta lagu soo bandhigay WWDC maaddaama ay lagama maarmaan tahay in la abuuro USB-kan, midkani si dhammaystiran ayuu noogu shaqeeyaa.
Tallaabooyinka la raacayo si loogu noqdo macOS Sierra
Tallaabada ugu horreysa waa tan caadiga ah: keydinta Mashiinka Waqtiga ama la mid ah si looga fogaado dhibaatooyinka haddii ay dhacdo guuldarro. Tani waa talaabada ugu horeysa ee kiisaska oo dhan waana iyada oo aan nuqulkan la helin ka dib dhibaatooyinka dhibaatooyinka luminta xogta, iwm.
Hadda waa inaan abuuro rakibayaasha macOS Sierra Taasi si fudud ayaa loo samayn karaa iyadoo la adeegsanayo ugu yaraan 8GB USB. Si tan loo sameeyo, waxaan raaci karnaa talaabooyinkan oo isku mid ah sidii loo abuuri lahaa rakibiyaha 'macOS High Sierra' oo aan ku samaynno eber rakibid ah:
Markii aan haysanno macOS Sierra ee ku jirta Mac waxaan gelinnaa USB-ga 8GB ama ka badan
Qaabee oo magaca ugu badalo USB-ga "Cinwaan la'aan"
Waxaan fureynaa Terminal oo waxaan ku dhajineynaa lambarka soo socda: sudo / Codsiyada / Ku rakib macOS \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / Cinwaan-codsi / Codsiyo / Ku rakib macOS \_ Sierra.app -nointeraction
Waxaan galnaa lambarka sirta ah ee isticmaalaha oo waxaan sugeynaa inuu dhammeeyo
Markay hawshani dhammaato (waxay qaadan doontaa xoogaa iyadoo ku xidhan hadba xawaaraha Mac iyo USB) waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan qaabeyno diskiga aan ku leenahay macOS High Sierra operating system-ka lagu rakibay Disk Utility waana intaas. Hada waa markigeenii ka rakibo USB taasna waxa ay tahay inaan samayno ayaa ah dami Mac ka iyo USB-ga ku xiran kumbuyuutarka markay shidan tahay riix Alt, Waxaan doorannaa USB-ka si aan u rakibno macOS Sierra marka uu dhammaadana waxaan ku lahaan doonnaa Sierra markale Mac-ga.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho macOS High Sierra maadaama farqiga u dhexeeya labada nidaam uu yaryihiin mana arki doonno horumar markii aan soo dejineyno nooca, laakiin tan waxaan ugu dhaafnay gacmahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sidee hoos loogu dhigaa macOS High Sierra ilaa macOS Sierra
Kernel Argagax dijo
Sideen ku abuuri karaa MacOs SIerra usb haddii uusan kasii muuqan AppStore?
Ujawaab Kernel Panic
Halkan waxaad kala soo bixi https://support.apple.com/es-es/HT208202
Jawaab Juan B Salas
waxaa jira waddo kale ... wax yar ka sii dheer laakiin waxtar leh haddii aad rabto inaad USB ka sameysato OS Sierra (maadaama aanan aaminin noocyada jira ee durdurrada). Waa in hoos loo dhigo El Capitan ... qaybtan haddii aad ku arki karto qaybta la iibsaday ee OS Sierra ay soo dejiso oo ay sameyso USB.
Waxaan isticmaalayaa miishaarka sare, laakiin maadaama aan haysto MacBook Pro-kayga wuu ka gaabiyaa sidii caadiga ahayd, barnaamijyada ayuu xidhaa, wakhti buu qaataa, wuuna i dhibaa ... Aad baan u faraxsanahay.
Ka jawaab carlos leon
Paqui Ku dijo
Waxaan la joogaa Carlos Leon, tan iyo markii aan saaray miisaanka sare ee makbook pro waa baradho leh furayaal. Aad ayaan ugu faraxsanahay Sierra, wax walbana way fiicnaayeen oo way shaqeeyeen. iyadoo sierra sare leh wax walboo ay burburayaan, waxay qaadataa kun sano in la bilaabo marka la barbar dhigo tii hore wax walbana waa xiraan, laalaadaan ama si fudud barnaamijyadu uma jaan qaadi karaan qaabka cusub. Kaalay, waxay dhihi lahaayeen xitaa haddii ay tahay nooc rasmi ah, waxay u dhaqantaa sidii beta wajigiisa labaad ugu badnaan. Waxaan qiyaasayaa inay noqon doonto qiimaha lagu bixinayo nidaam xor ah, laakiin kaalay ... marka xigta wax yar ayaan sugi doonaa inta aanan cusboonaysiin
Ku jawaab Paqui To
Wax la mid ah ayaa igu dhacay aniga oo ah kii ugu dambeeyay 2. Dhammaanteen waxaan ku casriyeynay xafiiska (naqshadeynta) kumbuyuutarradii hore (bartamihii 2009) aad ayay u dhibaataysan yihiin… dhammaantoodna aad bay uga gaabiyeen. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in ay naga dhamaatay waxyaabihii maareeyayaasha font (FontAgent) maxaa yeelay waxay siisaa dhibaatooyin badan waana hubaa inay tahay nacaladda MacOs.
Waxay qaadatay waqti dheer in la cusbooneysiiyo qalabka hadana waa waqti dheer in hoos loo dhigo ... Kuma taliyo cidna. Ugu yaraan hadda!
Maanta waxaan aaday High Sierra oo Office 2010 waxay joojisay la shaqaynta Sierra, way fiicnayd. Maxaan sameyn karaa hadda? Waa inaan iibsadaa Xafiis cusub?.
Waxyaabaha xun ayaa ahaa in barnaamijka nadiifinta (Dr. Cleaner) aan ku nadiifiyey kombiyuutarka oo dhan, faylasha qashinka, iwm.
Jawaab Mauricio Penagos
Kaliya waa inaad ka soo gasho xiriirkan isla tufaaxa https://support.apple.com/es-cl/HT208202Waxay ku geyneysaa dukaanka app-ka oo ku tusaya nooca 'MacOs Sierra version' si aad ugu soo dejiso qaabkii hore, u soo dejiso isagana uu wax walba u daryeelo
Ku jawaab Juan David
Salaan! Iima oggolaaneyso inaan rakibo, waxay leedahay waa nooc aad u gaboobay, ma taqaannaa waxaan sameyn karo si aan u rakibo?
Salaan! Iima ogola in aan rakibo sidoo kale, waxa kale oo ay leedahay waa nooc aad u gaboobay, ma jiraa qof garanaya waxa la sameeyo si loo rakibo?
Jawaab ku Mar
Aragti ahaan, waxa ay tilmaamayso ayaa ah inuu jiro nooc la cusbooneysiiyay oo lagu rakibay kumbuyuutarka oo kaliya waa inaad riixdaa sii wad waana taas
Waad salaaman tahay, miyaad ka bixi kartaa nooca 'High Sierra' ilaa Sierra oo leh 'High system' oo ah nidaamka hawlgalka?
Hadday sidaas tahay, dammaanaddii ma luntay?
Roger Arrambide dijo
Sidee tahay, yaa i caawin kara ??, waxaan haystay waqti dheer kii hore ee Sierra, (Waxaan u maleynayaa El Capitan?) Aniguna waxaan u beddelay diskiga mid adag oo WOOOWW my MacBook Pro wuxuu si fiican ula shaqeeyay dabayaaqadii 2011….
Wax walba way fiicnaayeen mana jecli inaan cusbooneysiiyo OS markay cusub yihiin maxaa yeelay marwalba waxay keenaan cayayaanka, sidaa darteed illaa iyo 2-3 usbuuc ka hor waxaan go'aansaday inaan cusbooneysiiyo Sierra, wax walbana way fiicnaayeen waxaana u maleynayaa in qaladkeygu ahaa inaan Markii aan arkay in waagii ugu dambeysay ee High Sierra iyo maalmo kadib, aan u cusboonaysiiyay HIG Sierra halkaasna madax xanuunku ka bilaabmay !!!!!.
Marka hore iyadoo xaqiiqda ah in codsiyada 32bit aysan mar dambe shaqeyn doonin, taas oo xaaladdan aan si dhammaystiran ula soo shaqeeyay Office 2011 ama 2010, ma ogi markaa hadda tan tan awgeed waa inaan iibsadaa kuwa cusub, marka hore waxaan go'aansaday inaan eego waxaa loogu talagalay YouTube-ka oo laga soo dejiyay 2016, layaabkeygu wuxuu ahaa 32bit sidoo kale !!!!! ... Sikastaba, xaqiiqda ayaa ah in mashiinku gaabis yahay, markii uu wareegayo qeybaha qaar wuxuu umuuqday 486 laga soo bilaabo 2000 iyo guud ahaan guud ahaan Qaybaha kale aad ayey uga gaabisay sidii hore.
Hadda, MA AAMIXI KARO !!!, haddii aan helo inaan ku daabaco qaabkan iyo wax walba, laakiin tan iyo shalay, daabacaadu way joogsatay, waxaad u dirtay wax daabacan, wuxuu gaarayaa liiska daabacaadda iyo «badhanka ciyaar» waxay dhahdaa resume daabacaadda, waad riixday, waxay u bilaabmaysaa sidii inay bilaabanayso, waxay maamushaa baarka dukumintiga kadib 3-4 ilbidhiqsi kadib, waxay dib ugulaabanaysaa qaab isku mid ah, arintu waxay tahay hadaan ku daabacan karo isla daabacada multifunctional HP, kombiyuutar kale, iphone iwm I xitaa waan furaa HP Utility, waan daabacayaa waqtiga imtixaanka waana daabacayaa, waxaan siinayaa iskanar waana uu shaqeeyaa…. DHIBAATOOYINKA OO DHAN WAA Daabac ka socda MacBookkayga ...
Horeyba waan usameeyay wax walbo, dib ayaan usameeyay daabacaadda pref, maktabada tag oo koobi com.apple.impresion, iwm iwm, ka saar oo dib u dhig daabacaha markale, WAX KASTA !!!.
Shakigeygu waa sida ay u murugsan tahay sida aan ugu laabano Sierra, mid ka mid ah ilaa Capitan, maxaa yeelay nuqulkii ugu dambeeyay ee amni ee aan haysto, wuxuu ahaa markii aan ahaa Sierra, oo leh High Sierra Ma dhigo waqtiga mashiinka si aan u sameeyo Nuqul, laakiin Waxaan ka baqayaa haddii aan nuqul keyd ah la sameeyo High Sierra, mar dambe kuma isticmaali karo Sierra, si kastaba ha noqotee, nuqulku wuxuu horeyba u jiraa 2 toddobaad waxaana hubaa inaan wax ka beddelay dukumiintiyada qaarkood, gaar ahaan Dropbox !!! ..
I CAAWI !!
1.- Miyaan sameysan karaa nuqul kayd ah si markaa kani uu yahay midka ugu badan ee dukumiintiyadayda halkaasna waxaan ka qaban karaa hawsha oo dhan si aan dib ugu rakibo Sierra waanan dhejin karaa nuqul aniga oo aan i weydiinin inaan u cusbooneysiiyo High Sierra?
2.- Miyaan dhibaato kale la kulmi doonaa taas oo MacBook-ga lagu dhiirrigeliyey?
3.- Miyaan mar uun ka fikiri karaa in waxqabadkii aan la sameeyay Capitan, miyaan la yeelan karaa High Sierra?
4.- Maxay yihiin halista in si fudud loo koobiyo galka DropBox si aad u isticmaasho nuqulka keydka ee Sierra ka dibna kaliya loo beddelo Dropbox?
5.- Dhibaatada daabacadu ma xiriir la leedahay?
Ayaa I caawin kara?
Ku jawaab Rogelio Arrambide
Sidee adkeysi ugu yeelanayaa crystal safayr ee Apple Watch Series 3 Edition?
Federighi wuxuu xaqiijinayaa in Fusion Drives ay la jaan qaadi doonaan nidaamka APFS